एमालेभित्र मच्चियो बबण्डर :ओलीले अत्याचार गरेको भन्दै झलनाथले दिए पार्टी फुटाउने चेतावनी !
ARCHIVE, POLITICS » एमालेभित्र मच्चियो बबण्डर :ओलीले अत्याचार गरेको भन्दै झलनाथले दिए पार्टी फुटाउने चेतावनी !
त्यसैगरी, बुढानीलकण्ठमा पनि नेपाल पक्षीय उम्मेदवार उठाउने भनिएको थियो, तर कागेश्वरीमा नेपाल पक्षका थापलाई दिएपछि बुढानीलकण्ठमा ओली पक्षका उम्मेदवार उठाएर सहमति भंग गरिएको थियो । आन्तरिक विवादकै कारण एमालेले धेरै स्थानमा उम्मेदवार घोषणा गरिसकेको छैन । अहिले प्रदेश कमिटीको बैठक चलिरहेको छ भने नेताहरु कुन पक्षका उम्मेदवारलाई कहाँ सेट गर्ने भनेर लागिरहेका छन् । यो समाचार हामीले तरुण खबरबाट लिएका हौ ।